Batariga CR2032: wax walboo ku saabsan baytariyada badhanka ugu caansan | Qalabka bilaashka ah
Batariga CR2032: wax walboo ku saabsan baytariyada badhanka ugu caansan
Mid ka mid ah qaababka ugu caansan ee xirmooyinka ama baytariyada waa CR2032, baytariyada badhanka caadiga ah ee leh tiro badan oo qalab ah. Laga soo bilaabo xisaabiyeyaasha qaarkood, ilaa Motherboard-yada kumbuyuutarka si loo ilaaliyo waqtiga iyo dejinta BIOS / UEFI, iyada oo loo marayo saacadaha, kontoroolayaasha, dhagaha dhagaha, iwm. Batariga noocan ah waxaa lagu gartaa cimri dhererkiisa iyo cabirkiisa yar marka loo eego qaabab kale sida AAA, AA, C, D iyo 9V.
Way kala duwan yihiin noocyada, sida Sony, Duracell, Maxell, iyo shirkado kale oo badan. Qiimuhu waa qiyaastii € 1,75 ama € 2, in kasta oo aad ka heli karto nabarro leh dhowr baytariyada CR2032 qiimo jaban markii aad ku iibsanayso baakado. Qiimaha iyo ismaamulka maahan waxa kaliya ee ka dhigaya kuwo soo jiidasho leh, sidoo kale cabirkooda, sidaa darteed waxay ku habboon yihiin aalado yaryar oo aad rabto dhaqdhaqaaq weyn ama aad u yareyso cabirka batteriga illaa ugu badnaan.
1 Batariyada badhanka
2 CR2032 qeexitaannada iyo xaashiyaha xogta
3 Isku xira:
Batariyada nooca Button-ka loo yaqaan ayaa lagu duubay inyar baakidh macdan ah oo u eg badhanka, haddaba magaceeda. Mid ka mid ah wejiyadooda waxay ku leeyihiin cirifka togan, oo u dhigma wejiga ballaciisu ugu weyn yahay, taas oo ah, halka ay sida caadiga ah ku leeyihiin sumadda iyo qoraallada. Wejiga dambe waa tiirarka taban. Si loo xiro iyaga, xiriir lala yeesho saldhig leh kirishbooy si loola xiriiro tiirka taban iyo flange xiriir ka sameeya dhinacyada iyo aaga sare (+) ayaa guud ahaan la isticmaalaa. Sidan oo kale, baytariga waxaa kor loogu qaadi karaa dhinacyadiisa midkood si uu u kala baxo oo si fudud loogu beddelo.
Sida for waxyaabaha iyaga ka kooban, waxaa laga samayn karaa meerkuri (iyada oo aan la tixgelinaynin ixtiraamka deegaanka), cadmium, lithium, iwm. Kharashka ay wataan ayaa mararka qaar ku filan inuu keeno koronto 3 ilaa 5 sano, iyadoo ku xiran isticmaalka aaladda. Marka lagu daro qiime jaban iyo noloshooda dheer, xiisadda la soo saaray inta lagu jiro dheecaanku waa mid isku mid ah, taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo kaamil ah si looga fogaado cirbadaha ama is-beddelka waqtiga. Sidoo kale heerkulka dheecaanku wuu hooseeyaa in lagu dhex daro aaladaha yaryar.
CR2032, sida baytariyada kale ee badhanka, ayaa u taagan iyaga xasilloonida sare ee isbeddelada deegaanka, wax aan baytariyada kale si fiican u taageerin. Waxay ku shaqeysaa heerkul ballaaran oo kala duwan, laga bilaabo -20ºC illaa 60ºC. Heerkulka ka dhigaya mid ku habboon meelaha kulul iyo qabow. Iyagu sidoo kale way wanaagsan yihiin in la keydiyo, maxaa yeelay waxay leeyihiin wax ka yar 1% is-bixid sanadkiiba, taas oo u oggolaanaysa iyaga in lagu keydiyo 5 jeer wixii baytariyada kale qaban lahaayeen.
Waxaa loo qaybiyaa gudaha qaabab kala duwan oo ku kala duwan cabir ahaan, nooca, danabyada, awoodda iyo culeyska, iyo xitaa dib loo soo celin karo, sida aad ku arki karto jadwalka soo socda oo ay kujiraan kuwa ugu caansan:
Diinta Tipo Danab (V) Awood (mAh) Miisaanka (g) Ballaca (mm) Dhererka (mm)
SR41 Xabagta qalinka 1,55 42 - 7,9 3,6
SR42 Xabagta qalinka 1,55 100 - 11,6 3,6
SR43 Xabagta qalinka 1,55 120 - 11,6 4,2
SR44 Xabagta qalinka 1,55 180 - 11,6 5,4
SR45 Xabagta qalinka 1,55 60 - 9,5 3,6
SR48 Xabagta qalinka 1,55 70 - 7,9 5,4
SR626SW Xabagta qalinka 1,55 28 0,39 6,8 2,6
SR726SW Xabagta qalinka 1,55 32 - 7,9 2,7
SR927SW Xabagta qalinka 1,55 55 - 9,5 2,6
CR2032 qeexitaannada iyo xaashiyaha xogta
ka astaamaha farsamada ee baterigan CR2032 Waxay yihiin:
Soosaarayaal: kala duwan
Koronto: 3 V
Awoodda: 235 mAh, taasi waa, waxay ku siin kartaa 235 mA muddo 1 saac ah ama qiyaastii 112 MA 2 saacadood gudahood, qiyaastii 66 mA 4 saacadood, iyo wixii la mid ah ...
Ballaca: 20 mm
Adag: 3,20 mm
Hadaad rabto inaad soo dejiso a Xaashida CR2032Waxaad aadi kartaa boggaga rasmiga ah ee soosaarayaasha kala duwan, tusaale ahaan, waa kan mid:
Waraaqaha Xogta Energizer CR2032
Waxaad ka heli kartaa dhowr nooc oo isku xirayaal ah suuqa nooca noocan ah ee badhanka, sida aad ku arki karto sawirada kore. Aad ayey u jaban yihiin, waxaadna uga iibin kartaa guddiga sabuuradda lagu dhejiyo ama si toos ah ugu xir iyaga fiilooyin, iyadoo ku xiran nooca.
Qaarkood isku xirayaasha waa kuwo caadi ah, isku xiraha salkaas iyo tabka kore sidaan kor ku xusay. Qaar kale xoogaa way ka duwan yihiin, taas oo u oggolaanaysa xargaha inay ku dul rogmaan buundada ku xeeran. Sidan ayaa ay ugu sii jirtaa xiriirka labada dhinac, laakiin way yara adkaan karaan in laga saaro haddii cabirrada shaqeeya ay yar yihiin. Mararka qaarkood ma sahlana in la sifeeyo oo la beddelo.
Qaar kale waa nooc yar, oo leh terminaal dheer oo batteriga ka qaban doona xagga sare kuna riixaya isku xiraha salka. Waxa kale oo jira qaar ay ku jiraan sanduuq hanan kara guri hal ama dhowr baytariyada iyo inay haystaan ​​fiilo ay awood ugu yeelan karaan inay si fudud ugula xiriiraan kuwa boodaya.
Tani waa wax walba oo loogu talagalay xirmooyinka CR2032, Waxaan rajeynayaa inaan waxtar helaySu'aal kasta ama tabarucaad ah, ha iloobin inaad ka tagto faallooyinkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » Batariga CR2032: wax walboo ku saabsan baytariyada badhanka ugu caansan
Markaad isticmaaleyso Window $ Waan ogaa inaan badalo batariga maxaa yeelay saacadda nidaamka ayaa dib u dhacaysay ka dib reboot kasta. Waxaan muddo dheer tan iyo markii aan u wareegay Linux waxaanan ogaaday inaanan beddelin xayndaabka farxadda leh. In Linux sidoo kale waxaan leenahay dhibaatooyin saacadda marka batteriga dhamaado?
Ku jawaab Loctitte
Haa, iyadoo aan loo eegin nidaamka qalliinka aad ku shaqeyso ... Batterigu si kastaba ha ahaadee wuu dhammaanayaa. Xusuusnow inaad saacaddaada la jaanqaadi karto UTC.
Waa maxay farqiga u dhexeeya CR2032 H iyo CR2032 (bilaa H)
Waad salaaman tihiin. Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadka.
Waxaan u maleynayaa inuu qalad ku jiro bogga, ama ma fahmi doono sababta cabirradan.
Qaar ka mid ah dhererka tixraaca lambarka waxaa lagu bixiyaa mm labada lambar ee ugu dambeeya, laakiin comma, taas oo ah, tusaale ahaan, 2032 waa 3,2 mm. Waxaad cabbiraysaa xoogaa cabiro la'aan; Tusaale waxaad gelisay CR2330 oo cabirkiisu yahay 30mm, taas oo ah, 3cm.
Sida loo abuuro seismograph guri-guri ah oo laga soo bilaabo xoqitaanka talaabo talaabo ah
Qabille oo gawaarida guryaha lagu sameeyo: sida loo isugu geeyo talaabo talaabo